Usobishini umsakazi weMetro FM ngokuphawula kwakhe | isiZulu
Usobishini umsakazi weMetro FM ngokuphawula kwakhe
Ngathi usethole amadlelo aluhlaza uMarawa
Useyashiya futhi emsakazweni waseKZN umethuli wezinhlelo kumabonakude
Ufakwe amasondo umsakazi obize uMengameli Zuma ‘ngomkhovu’
eGoli - I-SABC ikuqinisekisile ukumiswa komsakazi weMetro FM DJ Criselda Dudumashe ngemuva kokuthi eseka lowo owayeyiSekela likaNgqongqoshe weMfundo ePhakeme.
UCriselda wangena obishini ngenyanga edlule ngokweseka uMduduzi Manana ezinkundleni zokuxhumana lapho abhala khona wazwakalisa ukweseka kokuziphatha kwakhe ngemuva kwezinsuku ezimbalwa kuvele ukuthi ushaye owesimame endaweni yobumnandi eGoli.
Umphakathi wamgxeka uCriselda ngalokhu kwazwe kwaba wukuthi uyawususa lo mbhalo waphinde waxolisa.
OLUNYE UDABA:Kulindeleke avele enkantolo maduze uManana: Umbiko
Ngemuva kwalesi sigameko, i-SABC yenza uphenyo ngokuziphatha kwakhe wabe eseyamiswa emoyeni.
Okhulumela i-SABC uKaizer Kganyago ukuqinisekisile lokhu wathi uCriselda ngeke azwakale emoyeni okwamanje.
"UCriselda Kananda-Dudumashe akahlelelwanga ukuzwakala kulo msakazo okwamanje. Lesi yisinqumo esithathwe yilesi siteshi ngemuva kwezinkulomo zakhe azenze esidlangalaleni ngenyanga edlule," kusho uKganyago.
UCriselda akagcinanga ngokubhala ezinkundleni zokuxhumana kodwa wabuye waveza imibono yakhe yokweseka uManana emcimbini lapho okwakunezingxoxo mayelana nesifo sengculazi kanye nodlame olubhekiswe kwabesimame enyuvesi yaseVenda, eLimpopo, ngenyanga edlule, kubika iSunday World.